Isticmaal Ogeysiisyada riixitaanka si aad u dhisto gaadiidka soo noqnoqda | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Isticmaal Ogeysiisyada riixitaanka si aad u dhisto gaadiidka soo noqnoqda
Isticmaal Ogeysiisyada riixitaanka si aad u dhisto gaadiidka soo noqnoqda
Si aad uga qaybgasho dhagaystayaashaada, waa inaad awood u yeelatid inaad dareenkooda ku qabato siyaabo macno leh. Tani had iyo jeer ma aha hawl fudud, si kastaba ha ahaatee, gaar ahaan marka ay jiraan waxyaabo badan oo carqaladeeya aaladahooda gacanta.
Nasiib wanaag, ogeysiisyada riixa waxay bixiyaan xal wax ku ool ah. Ogeysiinta riixida waa hab loogu talagalay daabacayaasha iyo ganacsiyada kale si ay ugu gudbiyaan fariimaha tooska ah, fariimaha waqtiga dhabta ah ee dhagaystayaashooda, si ay gacan uga geystaan ​​kor u qaadida ka qaybgalka iyo wadista taraafigyada.
Maqaalkan, waxaan kaga hadli doonaa waxa ay yihiin ogeysiisyada riixida, waxaanan ku sharixi doonaa faa'iidooyinka isticmaalkooda. Waxaan sidoo kale ku dhex socon doonaa afar tabo oo ku saabsan sida loo isticmaalo ogeysiisyada riixitaanka si loo dhiso taraafikada soo noqnoqda, oo aan ka wada hadalno ku dhejinta boggaaga WordPress. Aan bilowno!
Faa'iidooyinka Isticmaalka Ogeysiinta Riixa
Ogeysiisyada riixidu waa farriimaha soo booda ee la gujin karo oo loo isticmaali karo daalacashada ama aaladaha mobilada iyo abka. Waa nooc ka mid ah isgaadhsiinta tooska ah, wakhtiga-dhabta ah.
Adigoo isticmaalaya ogeysiisyada riixitaanka, daabacayaashu waxay awoodaan:
Gaadh akhristeyaashooda halka ay wakhtigooda intiisa badan ku qaataan, aaladaha gacanta
Ku dar kanaal cusub oo ay si toos ah u maamulaan, kaas oo la mid ah warsidaha, laakiin leh qiime sare oo furan oo gujis ah.
Wade ka qaybgalka iyo booqashooyinka soo laabashada, ka caawinta soo-booqdayaasha caadiga ah u rogaan akhristayaasha daacadda ah iyo abuurista caadooyin
Wararka iyo daabacayaasha macluumaadka gaar ahaan waxay u taagan yihiin inay ka faa'iidaystaan ​​ogeysiisyada riixitaanka. Ka dib oo dhan, waxay bixiyaan hab wax ku ool ah oo lagu gudbiyo nuxurka wakhtiga xasaasiga ah, sheekooyinka, iyo cusboonaysiinta akhristayaasha. Ogeysiisyada riixidu waxay sidoo kale buuxin kartaa isla doorka warsidaha marka ay timaaddo dhisidda saldhigga akhristayaasha daacadda ah.
Faa'iidada kale ee ogaysiisyada riixitaanka ayaa ah fududaynta habka doorashadu. Tusaale ahaan, booqdayaasha ugu horreeya ee goobtaada ama abka mobaylka waxay u baahan doonaan oo kaliya inay doortaan U oggolow marka la soo jeediyo, ka dibna lagu dari karaa liiska macaamiishaada.
Ogeysiisyada riixitaanka abka moobilka gaar ahaan waxay leeyihiin qiimayaal ikhtiyaari ah oo sarreeya. Marka loo eego cilmi baarista, ku dhawaad ​​​​boqolkiiba 60 taraafikada intarneedka waxay ka timaadaa aaladaha mobilada, iyadoo heerka ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee ogeysiisyada riixitaanka app-ka moobaylka uu yahay 43.9 boqolkiiba isticmaalayaasha iOS iyo 91.1 boqolkiiba isticmaaleyaasha Android (maadaama hab-socodku si toos ah u yahay goobta dambe).
Hadda oo aanu daboolnay faa'iidada ogeysiisyada riixista, aan eegno afar tilmaamood oo loo isticmaalo si loo dhiso taraafig ku soo noqnoqda blogkaaga ama goobta wararka.
1. Abuur fariimo cad, kooban oo isticmaal Emojis
Ogeysiisyada riixidu waa gaaban yihiin. Waxaad sida caadiga ah leedahay kaliya ilaa 40 xaraf si aad u soo jiidato dareenka isticmaalayaasha oo aad fariintaada u gudbiso. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho luuqad fudud oo toos ah.
Hubi inaad doorato mawduucyada khuseeya akhristayaashaada. Waxa kale oo waxtar leh in aad fariintaada u habayso qaab ku beeraysa dareen degdeg ah oo dhiirigelinaya ficilka. Daabacayaasha wararka, hal dariiqo oo lagu soo jiito dareenka ayaa ah in lagu daro erey sida "WAR DEG DEG AH" ogeysiis riixis ah oo loogu talagalay sheeko waqtiyeysan oo muhiim ah.
Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan doontaa inaad isku daydo oo aad isticmaasho hal-lineers iyo Wicitaanada Ficilka (CTAs). Cilmi-baaristu waxay sidoo kale ogaatay in isticmaalka emojis ee ogeysiisyada riixitaanka ay si weyn u kordhin karto ka-qaybgalka.
Emojis ayaa kaa caawin kara gudbinta dareen ama dhawaaq gaar ah fariintaada. Waxaa dheer, waxay hagaajin karaan muuqaalka guud ee ogeysiiska.
Waxa kale oo muhiim ah in la abuuro fariin soo jiidasho leh. Si ka duwan ogeysiisyada webka ee isticmaala kaliya 'ogolow' ama ' xannibi' fariimaha gaabsiga ah, ogeysiisyada riixitaanka mobilada ayaa kuu oggolaanaya inaad shaqsiyayso fariinta aad dirto.
Marka aad farsamaynayso fariinta door-ku-galistaada, ka fiirso inaad u sheegto akhristaha qiimaha doorashadu leedahay oo aad u sharaxdo waxa ay heli doonaan 't Oggolow' badhamada inay noqdaan qaar qofaysan, iyagoo isticmaalaya ereyo ay ka mid yihiin "Haa!" ama "laga yaabaa in danbe".
2. Qaybi Dhegaystayaashaada
Dadku ma rabaan in si joogto ah loogu duqeeyo fariimaha, gaar ahaan kuwa aan iyaga khusayn. Isticmaalka hab guud, baahinta si loo riixo ogeysiisyada waxay keeni kartaa in macaamiishaadu ay xanaaqaan oo ay ka baxaan.
Marka loo eego cilmi-baarista, u kala qaybinta dhagaystayaashaada ogeysiisyada riixitaanka waxay kordhin kartaa CTR-yada 218 boqolkiiba. Adigoo aqoonsanaya macaamiishaada oo ku saleysan waxa ay xiiseeyaan, waxaad gaarsiin kartaa farriimaha shaqsiga loo gaar yeelay. Taa baddalkeeda, tani waa inay kordhisaa fursadda ay ku furi karaan fariimaha.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad u kala saari karto macaamiishaada. Tusaale ahaan, madbacadaha wararka waxay u qaybin karaan isticmaalayaasha iyadoo lagu salaynayo qaybaha nuxurka akhristuhu xiiseeyo inuu helo. Ikhtiyaarada kale ee kala qaybinta waxaa ka mid ah aagga wakhtiga, goobta, iyo nooca qalabka.
Barnaamijyada mobilada ayaa sidoo kale awood u siinaya daabacayaasha macluumaadka inay u oggolaadaan macaamiishooda inay doortaan nooca ogeysiisyada ay rabaan inay helaan iyo goorta. Tani waxay u ogolaanaysaa isticmaaluhu inuu dareemo xakameyn badan, iyo in yar oo lagu duqeeyo fariimaha aan loo baahnayn.
Tusaalaha farsamadan ficil ahaan waxaa lagu arki karaa The New York Times goobaha ogeysiinta riixitaanka ee abka mobaylka.
Mawduuca iyo daabacayaasha wararka waxay isticmaali karaan goobahan si ay u abuuraan fariimo qiimo leh dhagaystayaashooda. Waxaad baran kartaa sheekooyinka ay dhagaystayaashu xiisaynayaan inay helaan ogeysiisyada riixitaanka, oo u habbee si waafaqsan.
3. Ka fiirso wakhtiga fariimaha iyo inta jeer
Hal daraasad ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad ​​40 boqolkiiba isticmaalayaashu ay yiraahdeen way ka baxeen ogeysiisyada riixitaanka sababtoo ah waxay ku dhibayaan waqti khaldan. Intaa waxaa dheer, in ka badan kala badh ayaa sheegay in ay doorteen sababtoo ah waxay heleen ogeysiisyada riixitaanka oo xanaaqsan.
Cilmi baaris ayaa muujisay in heerka ugu sarreeya ee gujinta ogeysiisyada riixitaanka ay dhacaan Talaadada iyo saacadaha aan shaqeynin. Si kastaba ha ahaatee, tani dabcan waa mid guud. Go'aaminta wakhtiyada ugu waxtarka badan iyo inta jeer ee ogeysiiskaaga riixidu waxay qaadan kartaa xoogaa tijaabo ah.
Tani waa sabab kale oo ay qaybintu fure u tahay; waxay kaa caawin kartaa inaad go'aamiso goorta aad fariimaha u dirayso qayb kasta oo macaamiisha ah. Tusaale ahaan, goobaha ganacsiga e-commerce waxay isticmaali karaan ogeysiisyada riixitaanka si ay wax uga qabtaan ka-tagitaanka gaadhiga wax iibsiga.
Intaa waxa dheer, kala qaybinta dhagaystayaashaada waxay kuu ogolaanaysaa inaad hagaajiso fariimaha ku salaysan wakhtiga ay ku sugan yihiin iyo meelaha ay ku sugan yihiin. Haddii kala badh ka mid ah dhagaystayaashaadu ay ku sugan yihiin aag wakhti oo ka duwan kan aad joogto, ma rabto inaad dirto farriimaha ay heli doonaan saqda dhexe habeenkii.
Wararka, baloogyada, iyo daabacayaasha kale ee nuxurka leh ayaa inta badan ka faa'iidaysan kara diritaanka fariimaha ugu horreeya subaxdii. Tusaale ahaan, The New York Times waxay soo dirtaa "warbixin kooban oo subax" maalin kasta ogeysiin riix ah.
4. Lasoco cabbirada saxda ah
Sida istaraatiijiyad kasta oo suuqgeyneed ah, la socoshada waxqabadka ogeysiisyada riixitaanka ayaa muhiim ah haddii aad rabto inaad aragto waxa shaqeeya iyo waxaan shaqaynayn. Waxa laga yaabaa inay qaadato wakhti in la ogaado nooca fariimaha iyo wakhtiga dhagaystayaashaadu kaga jawaabayaan.
Waxaa jira cabbirro gaar ah oo aad fiiro gaar ah u leedahay kuwaas oo kaa caawin kara inaad qiimeyso waxqabadka ogeysiiska, oo ay ku jiraan:
Ka bixida oo ka bixida qiimayaasha
Hababka ugu wanaagsan ee qabashada iyo falanqaynta xogta way kala duwan yihiin, iyadoo ku xidhan goobaha iyo nidaamyada aad isticmaalayso si aad u dirto ogeysiisyada. Si kastaba ha ahaatee, waxa muhiimka ah ayaa ah in istaraatiijiyadaada dabagalku ay ahaato mid joogto ah, si aad si joogto ah u wanaajiso oo aad u wanaajiso ogeysiisyadaada riixida.
Sida Loo Soo Diro Ogeysiisyada Riixa Isticmaalka WordPress
Waxaa muhiim ah in la fahmo in ay jiraan farqi u dhexeeya shabkada iyo ogeysiisyada riixitaanka moobaylka. Ogeysiisyada shabakadu ma bixiyaan ikhtiyaarada shakhsiyaynta ee fariimaha gaabsiga ah ee ogeysiisyada moobilku sameeyaan, tusaale ahaan. Sidoo kale kuma ogola inaad gaarto isticmaalayaasha iOS. Intaa waxaa dheer, cilmi-baaris ayaa lagu ogaaday in ogeysiisyada riixitaanka app-ka moobilka ay leeyihiin qiimeoyin furan oo sare oo gujis ah.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad ku diri karto ogeysiisyada riixitaanka ee nooca ay yihiin adiga oo isticmaalaya WordPress. Si aad u dirto ogeysiisyada shabakadda, tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa qalab sida OneSignal.
Si aad u rakibto plugin-kan WordPress, aad dashboardkaaga WordPress oo u gudub Plugins > Kudar Cusub. Raadi plugin-ka OneSignal, ka dibna ku rakib oo hawl geli Halkaa, waxaad tixraaci kartaa hagahayaga waxtarka leh si aad ugu darto ogeysiisyada riixitaanka WordPress si aad u hesho tilmaamo dheeraad ah.
Haddii aad rabto inaad dirto ogeysiisyada riixitaanka mobaylka, dhanka kale, waxaad samayn kartaa nooca app-ka moobilka ee degelkaaga adoo adeegsanaya adeeg sida MobiLoud.
Plugin-kooda bilaashka ah waxay ka caawisaa si fudud habka loogu beddelo boggaaga WordPress app kaas oo aad isticmaali karto si aad u dirto ogeysiisyada. MobiLoud waxaad ku abuurtaa oo si toos ah uga soo dirtaa ogeysiisyada riixitaanka dashboardkaaga WordPress. Waxa kale oo ay siisaa ikhtiyaarka akhristayaasha si ay u go'aansadaan mawduucyada ay rabaan inay helaan ogeysiisyada riixitaanka. Tani waxay ku habboon tahay baloogyada, bogagga wararka, iyo daabacayaasha kale ee macluumaadka kuwaas oo doonaya inay kordhiyaan ka-qaybgalka.
Deegaankan dhijitaalka ah ee dadku ku badan yahay, waxa kaliya oo aad haysataa fursado badan oo aad ku mashquulin karto booqdayaasha oo aad ku qanciso inay soo noqdaan. Ogeysiisyada riixidu waxay bixiyaan hab wax ku ool ah oo taas lagu sameeyo.
Nasiib wanaag, abuurista ogeysiisyada riixitaanka webka iyo mobilada iyada oo loo marayo WordPress waa sahlan tahay. Markaad sidaas samaynayso, maskaxda ku hay afartan talo:
Farriimo cad, soo jiidasho leh, oo kooban ku samee emojis si aad u kordhiso ka qaybgalka
Isticmaal abka mobaylka si aad u kala qaybiso dhagaystayaashaada oo aad u abuurto fariimo la beegsaday.
Ka fiirso wakhtiga iyo inta jeer ee ogeysiinta gudbinta
Lasoco jaangooyooyinka muhiimka u ah ganacsigaaga, si aad u wanaajiso oo aad u wanaajiso istaraatiijiyada ogeysiinta riixida.
Ma qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan isticmaalka ogeysiisyada riixitaanka? Noogu sheeg qaybta faallooyinka ee hoose!
5 Qodob oo Muhiim u ah Boostada Facebook ee Sareysa
MalCare vs Sucuri vs Wordfence vs SiteLock vs Ammaanka iThemes - Isbarbardhigga